हाम्रो सौर्यमण्डलमा आइपुग्यो अर्कै ग्रहको प्रविधि ! के यो पिण्डमा एलियन आएका छन् ? – Naya Kura Daily
August 20, 2020 96
काठमाडौं। २ वर्ष पहिले सन् २०१८ मा हाम्रो सौर्यमण्डलमा आइपुगेको एक वस्तु एलियन प्रविधि अर्थात अर्कै ग्रहमा बस्ने प्राणीले पठाएको वस्तु हुन सक्ने वैज्ञानिकहरुले संकेत पाएका छन् । निकै रहस्यमय तरिकाले हाम्रो सौर्यमण्डलमा आएको ओउमुआमुआ नामको यो वस्तुलाई वैज्ञानिकहरुले सुरुमा उल्का पिण्ड (एस्टोरोइड) ठानेका थिए । तर, यसको अध्ययन गर्दै जाँदा यो एलियन प्रविधि हुन सक्ने देखिएको छ । यो एलियन प्रविधि नै भएको पुष्टि भएमा यसलाई पठाउने अर्कै ग्रहका प्राणीको बारेमा पनि अध्ययन गर्न सकिनेछ । यसरी एलियनसम्म नै मानिसको पहुँच पुग्न सक्नेछ ।
ब्रह्माण्ड निकै ठूलो छ र यहाँ अर्बौंको संख्यामा ताराहरु छन् । सूर्य पनि यिनैमध्येको एक मध्यम आकारको तारा हो । सूर्य टुक्रिएर पृथ्वी बनेको र यहाँ प्राणीको विकास भएको वैज्ञानिकहरुले बताउँदै आएका छन् । यही आधारमा सूर्यजस्तै अर्को कुनै तारा पनि टुक्रिएर पृथ्वीजस्तै ग्रह बनेको हुन सक्ने र त्यहाँ पनि प्राणाीको विकास भएको हुन सक्ने वैज्ञानिकहरु विश्वास गर्छन् । ती तारा सूर्यभन्दा पहिल्यै टुक्रिएर प्राणीको विकास भएको र त्यहाँ मानिसभन्दा विकसित प्राणी हुन सक्ने समेत वैज्ञानिकहरु विश्वास गर्छन् । तिनै विकसित प्राणीले ब्रह्माण्डको अध्ययन गर्ने क्रममा पठाएको प्रविधि यो पिण्ड हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसलाई एलियन प्रविधि मान्नुको पछाडिको कारण यसको पछिल्लो गतिविधि हो । यो पिण्ड अहिले सौर्यमण्डलमा विस्तारै सरिरहेको छ जसले यो पिण्डलाई कुनै शक्तिले धक्का दिइरहेको देखिन्छ । यसलाई अर्को ग्रहमा बस्ने प्राणीहरुले सारेको हुन सक्ने वैज्ञानिकहरुको अनुमान छ । सौर्यमण्डलमा आएपछि केही महिनासम्म यो पिण्ड स्थिर थियो । लाइभसाइन्सका अनुसार पछि यो पिण्ड सर्न थालेको हो । वैज्ञानिकहरुले यो पिण्डको अध्ययन गरिरहेका छन् यद्यपि यसको बारेमा ठोस जानकारी अझै प्राप्त भएको छैन ।
हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अन्तरिक्ष वैज्ञानिक एभी लोएबका अनुसार यो वस्तुलाई एउटा एलियन मेसिनले तानिरहेको छ र त्यो मेसिन एक मिलिमिटरभन्दा पनि मसिनो छ वा यसलाई सौर्य विकिरणले आफूतर्फ तानिरहेको छ । कैयौं वैज्ञानिकहरुले भने यो पिण्डको चारैतिर ठोस हाइड्रोजन विष्फोट भइरहेकोले यसले आफैं आफ्नो चाल बदलिरहेको बताएका छन् । १७ अगष्टमा द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्समा एबी लोएब र थियेम होआंगले भने हाइड्रोजन विष्फोटको थ्योरीलाई खारेज गर्दै यस्तो हुन नसक्ने बताएका थिए । उनीहरुले सौर्यमण्डलमा एलियन नै आउन सम्भव भएको थ्योरीमा जोड दिएका थिए ।
शिकागो युनिभर्सिटीका अन्तरिक्ष विज्ञानी सेलिगम्यानका अनुसार ओउमुआमुआ एस्टोरोइडजस्तै गरी आएको भए पनि यसको पछाडि पुच्छर थिएन र कुनै प्रकाश पनि थिएन । यही कारण यो हाम्रो सौर्यमण्डलभन्दा बाहिर आएको कुरा निश्चित भएको उनले बताएका छन् । यसको आकार १३०० देखि २६०० फिट मानिएको छ । यो निकै ढिलो रकेट इन्जिनजस्तै हाम्रो सौर्यमण्डलमा घुमिरहेको छ ।
Prev“गोली अझै चलिरहेको थियो तर भाग्यले म जोगिएँ।”
Nextपूजा र प्रकाशविचको विवाद टुंगियो